Booliska Garoowe oo ku mashquulsan qabqabashada kooxo baarasha kula kaca rayidka magaalada. – Radio Daljir
Janaayo 3, 2013 7:03 b 0
Garoowe, Jan, 03- Iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay ay sii kordheysay cabashooyinka ka soo Yeeraya dadka rayidka ah ee ku nool magaalada Garoowe ka gadaal kolkii xaafadaha magaalada ay ku soo bateen kooxo dadka ka dhaca taleefoonada gacanta iyo waxyaabaha kale ee jeebka ay ku wataan ayaa waxaa arimahaasi soo afjariddeeda u hawl galay ciidanka amniga.
Taliyaha Saldhigga dhexe ee Garoowe Dhame Aadan Muuse Jaamac ayaa Radio Daljir u sheegay in ciidamadu ay dadaal ugu jiraan wax ka Qabashada kooxahaasi dadka rayidkaa u galaya luuqyada iyo meelaha mugdigaa xiliyada habeenkiiya.
Dhamme Aaden ayaa Sidoo kale xusay in howlgal ay ciidamadu sameeyeen habeenadii la soo dhaafay lagu soo qabqabtay tiro ka mid ah kooxahaasi iyo waliba kooxo? isticmaala maandooriyaha, waxaana ragaasi qaar kamida la horgeeyey sharciga si loogu qaado danbiyadooda sida uu sheegay taliyaha
Ugu danbeyntii Taliyaha ayaa hoosta ka xaqiiqay in ay sare u qaadi doonaan amaanka magaalo madaxda Puntland ee Garoowe, ayna kaa hortagi doonaan wax walboo xagal-daac amni u keeni kara bulshada.
Waxgaradka magaalada Baladweyne oo kulan ka yeeshay hawlaha cisbitaalka magaaladaasi.